Raadi qorshe - Caymiska Caafimaadka Deegaanka ee Gobolka Washington - CHPW
Waad u qalmi kartaa qorshe caafimaad oo bilaash ah ama qiimo jaban oo CHPW ah.
Taas waxaa ka mid ah aragga, ilkaha, iyo waxtar badan oo dheeri ah oo caafimaadkaaga taageera.
Baadh Qorshaha Caafimaadka Apple Baadh qorshayaasha Medicare
Miyaan dalbadaa Apple Health (Medicaid), Medicare, mise labadaba?
Waad u qalmi kartaa haddii aad buuxiso shuruudaha dakhliga qaarkood, oo isbeddeli kara sannad illaa sannadka.
Dalbo Apple Health haddii…
✓ Waxaad tahay da'da 19 illaa 64
✓ Dakhligaaga sanadlaha ah ee qoyska ayaa ka hooseeya ama ka hooseeya heerka Apple Health *
✓ Waxaad tahay muwaadin Mareykan ah ama buuxiya shuruudaha socdaalka ee Medicaid
Isqorista Apple Health
Dalbo Medicare haddii…
Mid ama kabadan waxyaabaha soosocda waa run:
✓ Waxaad ka weyn tahay 65, ama waxaad ku dhow dahay 65
✓ Waxaad ka yar tahay 65 laakiin waxaad leedahay naafonimo qaarkood
✓ Waxaad leedahay hawl gab kilyaha ah
Isku qor Medicare
Labada dalbo haddii…
✓ Dakhligaaga ayaa ka hooseeya ama ka hooseeya heerka Apple Health *
* ($ 1,482 / mo loogu talagalay qoys keli ah)
Eeg jaantusyada u qalmida
Waa maxay farqiga u dhexeeya Apple Health (Medicaid) iyo Medicare?
Medicaid waa barnaamij federaal ah oo bixiya daryeel caafimaad dadka dakhligoodu ka hooseeyo xaddi go'an. Medicaid waxaa lagu magacaabaa Apple Health ee Gobolka Washington.
Medicare waa barnaamij federaal ah. Medicare waxay daryeel caafimaad siisaa dadka jira 65 iyo wixii ka weyn, iyo sidoo kale dadka kayar 65 sano oo leh naafo gaar ah.
CHPW waa qorshe caymis caafimaad oo aan macaash doon ahayn. Waxaan la shaqeyneynaa gobolka si aan u siino qorshooyinka daryeelka caafimaadka Apple Health iyo Medicare qaatayaasha u qalma. Maaddaama aan faa'iido-doon ahayn, waxaan dib u maalgelinaynaa lacagta aan dib ugu celinno adeegyada aan siinno xubnaheenna iyo bulshada aan ka tirsan nahay. Taasi waa sababta aan u awoodno inaan bixinno daryeel heer sare ah, iyo sidoo kale faa'iidooyin badan oo aysan daboolin Apple Health oo keliya.
Waxbadan ka baro CHPW ➔
Faa'iidooyinka + barnaamijyada waxaa ka mid ah:
Daryeelka hore iyo umusha ka dib
Talooyin caafimaad oo bilaash ah 24/7
Telefoonada gacanta oo bilaash ah
Kaararka hadiyada ee Amazon ee baaritaanka carruurta sifiican u socda
Keenida Guriga Daryeelka Caafimaadka
Waxaan bixinaa helitaanka dhakhaatiirta iyo kalkaaliyayaasha caafimaadka ee gobolka oo dhan. Waxaan kaa caawin doonaa inaad hesho adeegyada aad u baahan tahay, markii aad u baahatid iyaga. Waxaan ku siineynaa faa'iidooyin dheeri ah si aan kaaga caawino inaad dareento sida ugu fiican.
Halkan ka raadi →
Waxaan xubnaheena u fidinaa barnaamijyo gaar ah iyo faa'iidooyin caawin kara qoyska oo dhan.
Wax badan ka baro →
Soo ogow waxaad u baahan tahay inaad iska qorto.
Hadda isdiiwaangeli →
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Oktoobar 13, 2020